दु:खद खबर : मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक जनाको को’रोनाबाट मृ’त्यु ! – Jagaran Nepal
दु:खद खबर : मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका एक जनाको को’रोनाबाट मृ’त्यु !
सप्तरी। को’रोनाभा’इरसको जस्तै लक्षण देखिएर मृ’त्यु भएका सप्तरीका तीनमध्ये एक जनामा को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ। मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका सप्तरीको रूपनी गाउँपलिका- ५ का ४५ वर्षीय पुरूषमा मृ’त्युपछि को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश २ स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झाले जानकारी दिए।
को’रोनाबाट मृ’त्यु भएका पुरूष ४५ दिन पहिले मलेसियाबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। मंगलबार एक्कासी ज्व’रो आएर श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि उपचारका लागि उनलाई राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल ल्याइएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि धरान रिफर गरिएको थियो। धरान लैजाँदै गर्दा मंगलबार राति बाटोमै उनको मृ’त्यु भएको थियो।
सप्तरीकै निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका अन्य दुई जनाको पनि मंगलबार मृ’त्यु भएको थियो। उनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरो’ना सं’क्रमण नदेखिएको झाले बताए।
रोजेर मन्त्री बन्न भीम रावललाई ओलीको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना विरोधीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर फकाउने कोसिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले साउन लागेयता दोस्रो तहका नेताहरुलाई भेटघाट गर्नेक्रममा भीम रावलसँग दुई पटक भेट गरी रोजेर मन्त्रालय लिन र उपप्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले साउन महिनामै दुई पटक बालुवाटार बोलाएर रावललाई फकाएका हुन् ।
तर रावलले आफू मन्त्री पद आउन कसैको विरोध नगरेको भई पार्टीलाई विधिसंगत ढंगले सञ्चालन गर्ने विषय उठाएको र आफू अहिलेको मन्त्रीपरिषदमा सहभागी नहुनेसमेत जवाफ दिएका थिए । ‘तपाईलाई जुन मन्त्रालय लिन चाहनुहुन्छ त्यही लिनुस् उपप्रधानमन्त्री बन्नुस्’, ओलीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो तर रावलले त्यसलाई अस्वीकार गरी अन्य सहयोग लिनुस् तर म मन्त्री बन्नचाहिँ आउँदिन भनेका थिए ।
पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध गर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता रावललाई बालुवाटामा बोलाएको विषयले बाहिर त्यति चर्चा भने पाएन । आफ्नै पार्टीभित्रका नेता रावलको नाम सुन्ने बित्तिकै टाउको दुखाउने लेखराज भट्टलाई मन्त्री बनाएर रावललाई काउण्टर दिएका ओलीले साउन महिनामा दुई पटक रावललाई बोलाएर बालुवाटारमा भेटघाट गरेका स्रोतले जनाएको छ ।
रावलले ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालनमा खरो आलोचना गर्दै आएका छन् ।सरकारका कमजोरीमा तथ्यसहित बहस गर्ने र आलोचना गर्न सक्ने रावल ओलीका लागि कठिन पात्र बन्दै आएका छन् । अमेरिकी विकास र सहयोग सम्बन्धी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा रावलले लिएको अडानले सरकार नै धरमरमा पारेको थियो ।
दुई वटा स्थायी कमिटीको बैठकमा सो विषयले ओलीको आलोचना मात्र भएन सरकारकै कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको थियो । एमसीसीलाई पार्टीभित्रकै रावल, देव गुरुड र लिलामणि पोखरेल कै कारण बहसमा पुगेको थियो । सट्कसुटुक्क एमसीसी पारित गर्ने ओलीको योजना त्यसैकारण व्रेक लागेको र पार्टीभित्र विधिको कुरामा रावलको भनाईले प्रधानमन्त्रीलाई असजिलो पारेपछि बालुवाटारमा बोलाएर मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिएको हो ।रावल लगायत नेताहरुले नै एमसीसीलाई राष्ट्रव्यापी बहसमा लाने काम गरे । जुन ओलीका लागि पाच्य थिएन । जसकाकारण ओली र उनको सचिवालयका नेताहरु भीम रावलमाथि खनिन थालेका थिए ।
त्यही बीच रावल लगायत नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यले ओलीको कार्यशैली र उनले गत वैशाख ८ गते अगाडी ल्याएको अध्यादेश प्रकरणमा छलफलका लागि पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । त्यसपछि निरन्तर रुपमा रावलले ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर विरोध गरिरहेका छन् । रावलले उठाउँदै आएका विषयहरुमै गत १० असारबाट शुरु भएको बैठक अहिलेसम्म पनि नेकपाभित्र जारी छ । कुन बिन्दुमा पुगेर यो बैठकले पूर्णविराम लगाउला भन्ने कुनै नेताले बताउन सकिरहेका छैनन् । यही बेला रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामा २९ बुँदे आरोपसहितको १३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन नै तयार पारेर ओलीको राजीनामा माग गर्ने कुरा २० स्थायी समिति सदस्यको छलफलमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलाई मात्रिका यादव लगायत नेताहरुले साथ दिएका थिए । ओलीका आलोचक देखिएका रावललाई समेत ओलीले अहिले फकाउन बालुवाटारमा बोलाएर झण्डै दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । यस अगाडि पनि पार्टी बैठकका क्रममा रावलसँग छुट्टै छलफल गर्ने बताएका थिए ।
बालुवाटार रावललाई मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा ओलीले सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेतालाई पनि छुट्टाछुट्टै बोलाएर छलफल गरेका छन् । रावलसँगको छलफलमा भने प्रधानमन्त्रीले विगतको स्मरण गराउँदै आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
रावलको विद्यार्थी राजनीतिदेखिका प्रसंग कोट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरु मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्ने र लेनदेन एकोहोरो नभई दोहोरो हुने र आफू जुनकुनै मन्त्रालय रोजेर दिन तयार रहेको पनि बताएका थिए । रावलले मन्त्री बन्ने प्रस्ताव अहिलेलाई यही टुङ्ग्याउ बरु पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर समकालीन पुस्ताको सर्वमान्य नेता बन्न सुझाव दिएर फर्केका थिए ।
वि.सं.२०७७ साउन- २२,बिहीवार, ई.सं.२०२० अगष्ट – ६,शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० गुँलागा,प्रमादी,दक्षिणायन,वर्षा,भाद्र कृष्णपक्ष तिथि-तृतीया , २२:४८ बजे उप्रान्त चतुर्थी,नक्षत्र-शतभिषा , ११:१० बजे उप्रान्त पूर्वभाद्रपदा,योग-शोभन , ०६:०२ बजे उप्रान्त अतिगण्ड,करण-वणिज १०:०८ बजेदेखि भद्रा , २२:४८ बजे उप्रान्त कौलव,चन्द्रराशि-कुम्भ,आनन्दादि योग-वज्र, सूर्योदय-५:३० सूर्यास्त-१८:४७ दिनमान-३३ घडी १३ पला,पञ्चक।
राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन प्राप्त हुने हुँदा पद प्राप्तिको योग रहेकोछ। सरकारि धन सम्पति तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत आम्दानिका स्रोतहरु फराकिला पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक भई आफ्ना कुराहरु दिल खोलेर राख्न सकिनेछ। उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकिने हुँदा ईच्छा आकाक्षा तथा मनोकामना पुरा हुँने समय रहेकोछ।
नीतिनिर्माण तहमा तपाईको सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ भने आज गरिने निर्णयहरु सबैलाई मान्य हुनेछ । पढाई लेखाईमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । थप लगानि गरि व्यापार बिस्तार गर्न सकिनेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुँनुको साथै माया प्रेमको गा’ठो गसिलो भएर जानेछ । गित संगितमा बिषेश रुचि बढ्नेछ भने पारिवारिक जमघ’टमा सहभागि भई मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा आफन्त बाट सहयोग पाईनेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरि अरुलाई देखाउन सकिनेछ । धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा दिन बित्नेछ । प्रभावशालि ब्याक्तिहरु सँग भेट हुनेछ भने नयाँ योजनाको रुपरेखा कोरेर फाईदा हुँने काम अगाडि बढाउन सकिनेछ । मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा बृद्धि भएर जानेछ।
पढाई लेखाईमा थोरै समय दिदापनि प्रतिस्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ । जीवन साथिको सहयोेगले आर्थिक व्यावस्थापनका मुद्दाहरु हलगर्दै सम्बृद्धिको बाटोमा लम्कन सकिनेछ । मायाप्रेममा गर्ने जोडिहरुले आफ्नो सम्बन्धलाई बिबाहमा रुपान्तरण गरि अगाडि बढ्ने सहमती जुट्नेछ । थोरै स्रोत साधनको प्रयोगबाट असिमित आवस्यक्ताहरु पुरा गर्नसकिनेछ।
प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनार लगाउँदै आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँन सकिनेछ भने बिवादित बिषयहरुको निर्णय तपाईकै पक्षमा आउँनेछन् । न्यायिक निर्णयहरु तपाई आफ्नै पक्षमा फैसला हुँने तथा स’त्रुलाई परा’स्त गर्न सकिनेछ । अध्यानमा प्रगति हुनेछ भने सफलताको सिडि चुम्न सकिनेछ । व्यापार व्ययावसायमा लगानि बढाई आम्दानिका बाटाहरु फराकिला बनाउँन सकिनेछ।
साथिभाई तथा आफ्नो बिषेश मान्छेसँग दिनभर मिठा मिठा कुरा गरेर समय ब्यातित हुँने हुँदा मन खुसि रहनेछ । सवारि साधन,भौतिक सम्पति तथा आकस्मिक धनसम्पति लाभ हुनेछ । चिठ्ठा पर्ने तथा बिषेश मानिसबाट उपाहार पाईने अधिक सम्भावना रहेकोछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ भने बौद्धिकताको प्रयोग मार्फन आम्दानि बढाउँन सकिनछ।
समय मध्ययम रहेकोले राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले जनताको आलोचना सहनुपर्नेछ । व्यापारमा भनेजस्तो नहुँदा रुपैया पैसाको व्यावस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । आफन्त तथा घर भित्रकै मानिसहरुले असहयोग गर्ने तथा हल्लाको पछि लाग्नाले दुख पाईनेछ । स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला समस्या बल्झन सक्छ । माया प्रेममा एक अर्कालाई अबिश्वास गर्नाले मनमु’टाब बढ्नेछ भने पति पत्निबिचको सम्बन्धमा द’रार आउँन सक्छ।
कमर्शियल निर्णयहरु आजको दिन धाति राख्नु होला किनकी व्यापार व्यावसायमा घाटा लाग्ने योग रहेको छ भने बैदेशिक क्षेत्र सँग सम्बन्धित व्यावसायमा लगनि बढाउँदा प्रशस्त नाँफा कमाउन सकिनेछ । साना तिना कामका अल्झनु पर्दा अध्ययन तथा अध्यापनमा समय दिन सकिने छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला तपाईको यात्रा क’ष्टपुर्ण हुन सक्छ।